नबिल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित दुई योजनाको नाफामा वृद्धि
चैत १०, काठमाडौं । नबिल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित दुई योजनाको नाफामा वृद्धि भएको छ । नबिल ब्यालेन्स फण्ड २ र नबिल इक्वीटी फण्डको नाफामा वृद्धि भएको हो ।
नबिल इक्वीटी फण्डले फागुन मसान्तसम्ममा रू. १७ करोड ४१ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा माघ मसान्तमा रू. १५ करोड १६ लाख थियो । त्यसैगरि, नबिल ब्यालेन्स फण्ड २ ले फागुन मसान्तसम्ममा रू. ९ करोड ७७ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा माघ मसान्तसम्ममा रू. ८ करोड ५० लाख थियो ।
त्यसैगरि फागुन मसान्तसम्ममा नबिल ब्यालेन्स फण्ड २ को प्रतिइकाई खुद सम्पत्तिको मूल्य रू. १० दशमलव ९१ रहेको छ । सोही अवधिमा नबिल इक्वीटी फण्डको प्रति इकाई खुद सम्पत्तिको मूल्य रू. १० दशमलव ४१ पुगेको हो ।
नबिल इक्वीटी फण्डले फागुन मसान्तसम्म सूचीकृत शेयर, ऋणपत्र र सूचीकृत नभएका शेयर ऋणपत्र, मुद्दति निक्षेप गरेर कुल रू. ८६ करोड ८७ लाख लगानी रहेको छ । यो लगानी माघ मसान्तसम्ममा रू. ९० करोड ९१ लाख थियो ।
त्यसैगरि, नबिल ब्यालेन्स फण्ड २ को फागुन मसान्तसम्म सूचीकृत शेयर, ऋणपत्र र सूचीकृत नभएका शेयर ऋणपत्र, मुद्दति निक्षेप गरेर कुल रू. ६१ करोड ६३ लाख लगानी रहेको छ । यो लगानी माघ मसान्तसम्ममा रू. ५९ करोड ३९ लाख थियो ।